सरकारले के विप्लव समूहलाई ‘गलाउने’ रणनीति लिएको हो ? - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारले के विप्लव समूहलाई ‘गलाउने’ रणनीति लिएको हो ?
काठमाडौं, साउन ५ । नेपाल प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामालाई गएको मध्यराति पक्राउ गरेको छ। काठमाण्डूको गोठाटारबाट शनिवार राति साढे १२ बजे लामालाई पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सहकुलबहादुर थापाले बताए।
थापाका अनुसार राज्यले नेकपाका ‘हिंसात्मक गतिविधि’माथि प्रतिबन्ध लगाएको र लामामाथि राज्यविरुद्धको दुई-तीनवटा मुद्दा चलाइएको पृष्ठभूमिमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकालाई लामामाथि चलाइएका मुद्दामध्ये ललितपुरको नख्खुमा गराइएको बम विस्फोटको आरोपसम्बन्धी एउटा छ।
लामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाण्डू क्षेत्र नं. ९ बाट उठेका पनि थिए र कांग्रेसका उम्मेदवार ध्यानगोविन्द रञ्जितसँग पराजित भएका थिए। “उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज भएको नाताले उक्त विस्फोटमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता भएकोले उहाँमाथि त्यो मुद्दा चलाइएको हो,” थापाले भने।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नख्खुस्थित कार्यालयअगाडि गराइएको विस्फोटमा एक जनाको ज्यान गएको थियो भने अर्का घाइते भएका थिए। सो पार्टीका केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा आफूहरूले नै उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका थिए।
याे पनि पढ्नुस विप्लवका उपत्यका व्युरो इन्चार्ज माइला लामा जेल चलान
सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका ‘हिंसात्मक गतिविधि’ माथि प्रतिबन्ध लगाएयता प्रहरीले उसका ठूला नेतालाई पक्राउ गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। यसअघि नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमाण्ड इञ्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य ओली पक्राउ परेका थिए। त्यसभन्दा पहिले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पटक पटक पक्राउ पर्दै अदालतको आदेशमा छुटेका थिए।
सरकारले नेकपाका ‘हिंसात्मक गतिविधि’ माथि प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै उसका नेता, कार्यकर्ताका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न प्रहरी थप क्रियाशील भएको देखिएको पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको ठम्याइ छ।
सुरक्षा मामिलाका कतिपय जानकारहरू नेकपालाई ‘गलाएर’ वार्तामा ल्याउने सरकारको रणनीति हुन सक्ने बताउँछन्। त्यस्तैमध्येका एक रेग्मी भन्छन्, “सरकारले दोहोरो रणनीति लिएको देखिन्छ। एउटा उसका हिंसात्मक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरी शक्ति क्षीण गर्ने र अर्को वार्ताकै माध्यमबाट अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने।” पछिल्लो समय नेकपाको शक्ति क्षय हुँदै गएको रेग्मीको बुझाइ छ।
याे पनि पढ्नुस जेलबाटै माईला लामाले लेखे यस्ताे पत्र
पूर्वरक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको विचारमा आन्दोलनरत र त्यसलाई दबाउने दुवै पक्षले एकअर्कालाई शिथिल बनाउने रणनीति लिएका हुन्छन्। “नेकपाका माथिल्लो तहका नेतालाई पक्राउ गरेर वार्ताका लागि उसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ,”उनी भन्छन्।
यद्यपि न्यौपानेका अनुसार नेकपाले सरकारलाई गलाउने रणनीति लिएको चाहिँ खासै देखिँदैन। उनी थप्छन्, “भोजपुरमा एकजना प्रहरीलाई बाहेक उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई मारेको देखिँदैन। कतिपय घटनामा आफ्नै गल्तीले विस्फोट भएर उसका कार्यकर्ता मारिएका छन्।”
सरकारी वार्ता समितिको आग्रहका बीच वार्तामा नआएको र त्यसपछाडि नख्खुमा विस्फोट समेत गराएको पृष्ठभूमिमा प्रहरीद्वारा नेकपाका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ पर्नु स्वाभाविक भएको अर्का पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवालको तर्क छ।
आन्दोलनरत र राज्य दुवै पक्षको एकअर्काविरुद्धको रणनीति जेसुकै भए पनि समाधानका लागि वार्ताको विकल्प नभएकोमा सबै सहमत देखिन्छन्। उनीहरूको एकमत छ- ढिलो वा चाँडो आन्दोलनरत र राज्य दुवै पक्ष अन्त्यमा आउने भनेको सम्वादमै हो।
सिलवाल भन्छन्, “हिंसा गर्ने र हिंसा गर्न रोक्ने दुवै पक्षले हिंसा बन्द गर्नुपर्छ।” मुलुकले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको तीतो अनुभव गरिसकेको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिनु नै बुद्धिमत्ता हुने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। यसअघि द्वन्द्वमा मारिएका नेपालीकै सन्तान नै थिए नि। सुरक्षाकर्मीका रूपमा मारिएका नेपालीकै सन्तान थिए, माओवादीका रूपमा मारिएका नेपालीकै सन्तान थिए।
हुन त वार्ताको सम्भावनालाई राज्य पक्षले पनि नकारेको छैन। तर सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ- वार्ताअघि नेकपाले ‘हिंसात्मक गतिविधि’लाई तिलाञ्जलि दिनैपर्छ।
तर त्यसो भनिरहँदा वार्ताका नाममा नेकपाले शक्ति सञ्चयको रणनीति पनि लिन सक्ने सम्भावनाका बीच राज्यले उसमाथि दबावको रणनीति अवलम्बन गरेको हुन सक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। याे समाचार बीबीसी नेपालीबाट लिइएकाे हाे ।